​एचएफसी रेष्टुरेन्टमा बच्चादेखी बृद्ध सम्म
इटहरी । पुर्वाञ्चलको ब्यापारिक केन्द्रको रुपमा स्थापित भएको इटहरीमा पछिल्लो समयमा व्यवसाय गर्नेहरुको बृद्वि भइरहेको छ । प्रदेश नं १ को केन्द्रको रुपमा समेत स्थापित इटहरीमा पछिल्लो समय व्यवसाय गर्नेहरुको होडबाजी चल्ने गरेको छ । यसरी होडबाजी चलिरहेको समयमा अक्टोवर १७ तारिकदेखि करिब २ करोडको....
​अघि सारे कुलमानले ‘इनर्जी बैंकिङ प्रणाली’
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जाको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न ‘इनर्जी बैंकिङ प्रणाली’को विकल्प अगाडी बढाएको छ । बिहीबार राजधानीमा बारबरा फाउन्डेसनले गरेको एक कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिउँदको समयमा हुने माग धान्न बढी विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बताउँदै इनर्जी बैंकिङ प्रणालीको विकल्प अगाडी....
चौधरी ग्रूपले गर्यो ओमेगा थ्री मोबाइल लञ्च
धनकुटा । पूर्वी पहाडका ३ जिल्लामा सेवा दिने उद्देश्यले चौधरी ग्रूपले धनकुटाको व्यापारिक केन्द्र हिलेमा सीजी मोबाइलको ओमेगा थ्री लञ्च गरेको छ ।
ग्रूपका नेशनल सेल्स म्यानेजर झविन्द्र भण्डारी र इटहरीको आधिकारिक विक्रेता न्यू पाण्डे बिजनेश सेण्टरका प्रोप्राइटर लेखनाथ पाण्डेले बुधवार हिलेमा एक कार्यक्रम....
​व्यापार तथा सम्वद्ध श्रमिक संघमा कोइराला
विराटनगर । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँग आबद्ध नेपाल व्यापार तथा सम्वद्ध श्रमिक संघ विराटनगर समितिको अध्यक्षमा रुद्रप्रसाद कोइराला (सीताराम) चयन भएका छन् । बिहीबार विराटनगरमा भएको कार्यक्रममा कोइरालाको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
समितिको उपाध्यक्षमा राजेशकुमार मण्डल, सचिवमा सुरेश पासवान र....
​विश्वको उत्कृट १५० होटलमा पर्यो नेपालको यो होटल
काठमाडौं । सौराहाको सेभेन स्टार होटलले अन्तर्राष्ट्रिय होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्वालीटी अवार्ड जितेको छ । स्पेनको ग्लोबल ट्रेड क्लबले अवार्ड दिएको हो ।
विश्वका एक सय ५० उत्कृष्ट होटलहरुमा सौराहाको सेभेन स्टार छानीएको हो । संस्थाले गोप्य रुपमा होटलको अनुगमन गर्छ । उच्चस्तरीय सेवा....
​भोजपुरमा कच्चा पदार्थको अभाव,धातु उद्योग संकटमा
काठमाडौं । कच्चा पदार्थको अभाव भएपछी भोजपुरमा संचालित धातु उद्योग संकटमा परेका छन् । धातु उद्योगबाट चर्चा पाएको टक्सार बजारमा यतिवेला कच्चा पदार्थ अभाव भएको पाइएको छ । पहिला भोजपुरका रैथाने नेवारी समुदयहरुले घरै पिच्छे जस्तै धातुका उद्योगहरु सञ्चालन गरिरहे पनी हालभने करिव ७ घर....
​‘मेड इन नेपाल’ चैत पहिलो सातामा
न्यूजलय बुधबार ०९, फागुन २०७४
काठमाडौं । नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धनका लागि गर्दै आएको ‘मेड इन नेपाल–वस्तु तथा सेवा प्रदर्शनी’को छैटौं संस्करण आगामी चैतको पहिलो साता सुरु गर्ने भएको छ । मञ्चले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी चैत २ देखि ४ गतेसम्म भृकुटीमन्डपमा प्रदर्शनीको आयोजना हुने जनाएको....
​फिदिममा च्याबु्रङ महोत्सव सुरु
पाँचथर । पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा अन्तराष्ट्रिय च्याबु्रङ महोत्सव सुरु भएको छ । महोत्सवको प्रदेश १ का प्रमुख गोविन्द सुब्बाले उद्घाटन गरे । सास्कृतिक पोशाकमा सजिएको टोलिले च्याबु्रङ बजार परिक्रमा पछि महोत्सवको उद्घाटन गरीएको थियो । लिम्बुजातीमा रहेको परम्परागत सास्कृतिक बाजा च्याबु्रङ र च्याब्रुङ नाँचको प्रवद्र्धन....
​सहकारी संचालनमा आयो नयाँ नीति
इटहरी । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा सरकारले कडाई गर्न थालेको छ । सहकारी संस्थाहरुमा ठगी बढेको तथा दर्ता गराएर कारोबार नगरेको पाएपछि सरकारले कडाई गर्न थालेको हो । विगत केही समयमा नै सहकारी क्षेत्रमा थुप्रै नियम तथा निर्देशनहरु जारी भएका छन् । सहकारी....
​नुडल र सेवइको लागि लोकप्रिय रोसा ब्राण्ड
इटहरी । तपाईलाई खाजाको रुपमा के खान मन पर्छ ? वा खाजाको रुपमा के खाने गर्नु हुन्छ ? सबैको आफ्ना आफ्नै रोजाई हुन सक्छ । केहीलाई भने थुक्पा र चाउमिन मन पर्न सक्छ ।
शाकाहारी र मांसाहारीले आफ्नो स्वाद र आवश्यकताअनुसारका विभिन्न तरकारी र....